मलाई कुन भान्से ग्याजेटहरू चाहिन्छ?
मार्च 21, 2021 शुभम शर्मा आवास, सामान किन्नुहोस्, UK
मुख्यमा, भान्साकोठा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश हो जुन तपाईंको घर तपाईंको घरसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यहाँ एक धेरै विभिन्न ग्याजेटहरू छन् जुन हामी दैनिक रूपमा दैनिक रूपमा भान्छामा प्रयोग गर्दछौं। साथै, त्यहाँ धेरै कार्यहरू छन्
भारतमा घर कसरी पाउने?
डिसेम्बर 16, 2020 एन्टिका कुमारी आवास, भारतीय
सर्वप्रथम, बंगलोरलाई भारतको सिलिकन उपत्यका मानिन्छ। त्यसोभए यो बंगलोरलाई भारतको बाँच्ने लागतको लागि प्रोक्सीको रूपमा प्रयोग गर्ने जस्तो छ अमेरिकाको स्यान फ्रान्सिस्को प्रयोग गरी बस्ने लागतको लागि प्रोक्सीको रूपमा।
फ्रान्समा कसरी घर पाउने?
डिसेम्बर 2, 2020 एन्टिका कुमारी फ्रान्स, आवास, यात्रा
फ्रान्समा घर किन्नु वा अपार्टमेन्ट किन्नु भन्दा धेरै लोकप्रिय छ विशेष गरी भूतपूर्व पाटीहरू माझ। यदि तपाईंको बसाई अस्थायी हो भने, यो सायद तपाईंको उत्तम विकल्प हो किनभने सम्पति खरीद गर्न धेरै महँगो पर्दछ। जहाँसम्म, यदि यो एक मार्ग हो